Uri mutengesi here? Dzidza nezve maficha atinayo kwauri. Ona zvakawanda
Mutengo Acura Alfa Romeo Am General Asia Audi Avanti Motors BMW BYD Baic Baic Yinxiang Brilliance Bugatti Buick Cadillac Changan Changhe Chery Chevrolet Chrysler Citroën DFSK Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Dodge DongFeng FAW Ferrari Fiat Ford Foton Freightliner GONOW Geely Great Wall Hino Honda Hummer Hyundai Infiniti Isuzu JAC Jaguar Jeep Jetour Kia Lamborghini Land Rover Lexus Lincoln MINI Mahindra Mazda Mercedes-Benz Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Pontiac Porsche Renault Rover Saab Seat Sinotruk Smart Souesat Ssangyong Subaru Suzuki Tesla Toyota Volkswagen Volvo Škoda
Rumwe ruzivo (Zvingakudetsera)
Zvimwe zvinhu (Inesarudzo)
Rega vatengi vako vazive mota yauri kutengesa zvirinani.
Mwenje pane alarm
Kupeta kumashure chigaro
Roof mukwende rack
Mutyairi bhegi remhepo
Yemagetsi akamedura simba muparidzi
Galvanzie zvechizarira hurongwa
Pamberi pemwenje yemwenje
Airbag yemutyairi uye mutyairi
Kumashure kwemwenje yemwenje
Anti rwakapetwa bhaa
Chechitatu brake mwenje yakatungamirwa
Sarudza chete kana mota yako ichidzivirira bara. Ukasarudza iyi sarudzo uye ruzivo rwacho ruri rwekunyepa, chako chinobviswa uye account yako inorambidzwa.
Mota yangu haina zvombo Chikamu 3 Chikamu 4 Chikamu 5 Chikamu 6 Chikamu 7
Steering kukwirisa kukwirisa
Magetsi kudzora kumashure ekuona magirazi
Mwenje ine otomatiki kugadzirisa
Musoro unodzora pazvigaro zvemberi
Kureba-chinjika chigaro chemutyairi
Remote hunde kuburitswa
Otomatiki girazi kuvhara
Kadhi re SD
Spare vhiri chinobata
4.3/5 - 6466 mavoti